Tombontsoa 10 amin'ny programa tsy fivadihana sy valisoa ho an'ny mpanjifa | Martech Zone
Miaraka amin'ny ho avy ara-toekarena tsy azo antoka, zava-dehibe ny fifantohan'ny orinasa amin'ny fitazonana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny traikefa ananan'ny mpanjifa miavaka sy valisoa noho ny tsy fivadihana. Miara-miasa amin'ny serivisy fanaterana sakafo isam-paritra aho ary ny programa valisoa nomen'izy ireo dia mitohy mitazona hatrany ny mpanjifa miverimberina.
Antontan'isa momba ny tsy fivadihan'ny mpanjifa
Araka ny filazan'ny Experian's Whitepaper, Fananganana ny tsy fivadihana marika amin'ny tontolon'ny lakandrano:
34% amin'ny mponina amerikana dia azo faritana ho mahatoky amin'ny marika
80% amin'ireo tsy mivadika amin'ny marika dia milaza fa tsy mividy marika tsy fantatra fotsiny mba hitsitsiana vola
Ireo mahatoky dia mandray hevitra vaovao ary mamaly izany avo roa heny ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny fanentanana manasongadina ireo tombontsoa azo avy amin'ny programa momba ny tsy fivadihana
Manome ireo tsy mivadika taha ambony kokoa noho izany momba ny fanadihadiana sy ny fangatahana famerenana, ary koa ny fanasana ho lasa mpankafy marika amin'ny tranonkala media sosialy
Tena manelingelina tokoa ny ankamaroan'ny orinasa manolotra fihenam-bidy ho an'ny mpanjifa vao nahazo ary avy eo tsy miraharaha ireo mpanjifa izay nijanona ho mahatoky ary misy akony lehibe indrindra amin'ny faran'ny orinasa. Voaporofo ny tombotsoan'ny programa valisoa ho an'ny tsy fivadihana:
75% amin'ireo orinasa amerikana manana programa tsy fivadihana dia miteraka famerenam-bola. Izy io dia miharihary fa ny tombony lehibe indrindra ho an'ireo orinasa mampiasa ny dolara amin'ny programa tsy fivadihana.
Ity infographic avy amin'ny Zinrelo, Top 10 tombontsoa azo avy amin'ny programa valisoa azo antoka, maneho ny tombony azo avy amin'ny programa valisoa tsy fivadihana:
Fivarotana famerenana mamerina - tanterahina amin'ny fanomezana valisoa ho an'ny karazana hetsika tsirairay, ao anatin'izany ny famoronana kaonty, ny fisoratana anarana mailaka, ny media sosialy manaraka, ny fampidinana sary, ny referral sns. Ity koa dia fomba tsara iray handrehitra indray ireo mpampiasa matory na hampitomboana ny varotra amin'ny mpanjifa ankehitriny.
Ampitomboy ny sandan'ny lamina averina - Ireo mpanjifa tsy mivadika dia mividy matetika kokoa ary mandany bebe kokoa isaky ny fifanakalozana.
Vidin'ny fakana mpanjifa ambany - Ampio referrals amin'ny programa valisoao mba hampielezan'ny mpanjifanao ny vokatrao amin'ny serivisy sy serivisinao. Ny tolo-kevitry ny vava dia mitondra lanjan'ny taonina amin'ny mpanjifa.
Hatsarao ny fifikirana amin'ny fifaninanana - Raha manana valisoa vitsivitsy voatahiry ny mpanjifanao dia mampisalasala azy ireo ny handao ny marikao… na dia lafo kokoa aza ny mpifaninana.
Ahenao ny fihenan'ny mpanjifa - Manana vokatra tokony hafindra ve ianao? Aza manilika azy ireo maimaimpoana amin'ny olon-drehetra fa manolora safidy ambony kokoa ho an'ny mpanjifa tsy mivadika.
Ampitomboy ny tahan'ny fiovam-po - Asehoy ny isan'ny isa horaisin'ny mpanjifa amin'ny sarety misy azy ankehitriny… ary mety handany bebe kokoa izy ireo hahazoana teboka bebe kokoa.
Safidy vokatra misy fiantraikany - Mampiasà multiplier mba hahatonga ny vokatra marbra avo lenta kokoa ho an'ny mpanjifanao mahatoky.
Manangana profiln'ny mpampiasa manankarena - Mila fampahalalana misimisy kokoa mba hamaritana tsara kokoa sy hanokana ny fifandraisanao amin'ny varotra? Manome isa valisoa ho an'ny famitana ny mombamomba sy ny fizahana ny tapakila ho an'ny fividianana ivelan'ny Internet.
Ampitomboy ny atiny ateraky ny mpampiasa - Manome valisoa ireo mpanjifa amin'ny fanoratana fanamarihana, famaliana fanontaniana ary fampakaranao sary.
Ampitomboy ny fandraisana anjara amin'ny haino aman-jery sosialy - Omeo teboka fahatokisana ho an'ny fizarana sosialy sy fanentanana ny mpampiasa.
Zinrelo koa dia manome rijan-kevitra vitsivitsy momba ny fanaovana kajy ny fahombiazan'ny tsirairay amin'ireo tetikady valisoa ireo ao amin'ny infographic.
Momba an'i Zinrelo
Zinrelo manolotra andro moderina, sehatra valisoa mahatoky izay manatsara ny varotra averimberina sy ny fidiram-bola isaky ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fandraisana anjaran'ny mpanjifa 360-degree. Zinrelo dia mamporisika ny refim-pahatokiana marobe ao anatin'izany ny transactional, social, referral, fiankohofana ary ny tsy fivadihana amin'ny fitondran-tena. Izy io dia manohana ny fanaparitahana fantsona omni izay manerana ny fivarotana birao, finday ary ara-batana.
Tags: fahazoana mpanjifany vidin'ny mpanjifampanjifa tsy mivadikasehatra tsy fivadihan'ny mpanjifastatistikan'ny tsy fivadihan'ny mpanjifavalisoa ho an'ny mpanjifasehatra valisoa ho an'ny mpanjifadiscountingmampitombo ny salan'isa momba ny filaharanaambany ny vidin'ny mpanjifasehatra valisoa mahatokyprograma valisoahafetsenamombamomba ny mpampiasateny vavazinrelo
Inona no atao hoe Orchestration Marketing?